Kemgbe 1980s, na mgbasa nke ọtụtụ nje, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ahụike na-eyi gloves amụbawo nke ukwuu, mmata ndị mmadụ banyere nchebe gburugburu ebe obibi na nchedo onwe ha abawanyela. Ugbu a, ihe ụwa na-achọ kwa afọ maka mbọ aka ihe dị ka ijeri iri atọ, ọnụọgụgụ A ga-aga n'ihu na-eto.
Nyocha ahụike latex gloves akụkọ ihe mere eme
Nnyocha ahụike anyị nke oge a na-emepụta ọgwụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, nke na-eme ka ogo nke akpaaka dịkwuo mma, na-eme ka arụmọrụ dị mma, na-ebelata akwụkwọ ntuziaka, na-eme ka ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ, na-ebelata ike ike, na-echebe gburugburu ebe obibi, ma na-eme ka ndị ọrụ na-arụ ọrụ. gloves dị nro ma melite asọmpi nke ụlọ ọrụ ahụ.
Echiche echiche nke nyocha ahụike Medical latex gloves production line
Usoro mmepụta ihe na-agụnye ebe a na-ebunye ya, ebe a na-akpọ nkụ, ebe a na-agbanye mmiri akpaka, ebe a na-akpọ nkụ, na ebe a na-ebudata na-edozi n'usoro; a na-akwadebe mpaghara nke ọ bụla na draịvụ draịva; ihe mkpuchi emechiri arụnyere na draịvụ draịva, awụnyere ebu aka Glove na siliki mechiri emechi; ma ihicha mpaghara na tupu ihicha mpaghara na-ejikọrọ na a elu-arụmọrụ kwes okirikiri gas na-ekpo ọkụ ikuku oku, ihicha mpaghara na-ejikọrọ na a ihicha iyuzucha gas iyuzucha anwụrụ, na akpaka dipping ọrụ ebe jikọọ na a azọnye iyuzucha gas. iyuzucha. Ikuku anwụrụ, ihicha iyuzucha iyuzucha gas iyuzucha anwụrụ na roba itinye ọkụ iyuzucha gas iyuzucha anwụrụ na-niile jikọọ na iyuzucha gas ọcha usoro ngwaọrụ; ọ gụnyekwara kọmitii na-achịkwa ọnụọgụ eletriki, wdg.
Usoro usoro nnyocha
A na-ejikarị aka nyocha ọgwụ na-eme ka ọ bụrụ iji nyochaa oghere ọnụ onye ọrịa ma ọ bụ n'elu akpụkpọ ahụ, ọ ga-enwerịrị asambodo nchekwa ọgwụ CFDA. Ezigbo ike mgbagha na nkwụsị abrasion, ọ nwere ike imeghari n'ọtụtụ acid na-adịghị ike na gburugburu alkali na-adịghị ike na akpụkpọ anụ mmadụ.
Nke gara aga: General nnyocha nitrile uwe mmepụta akara
Osote: Slọ Ahụike Ahụike Latex Glove Production Line
Igwe Latex Glove
Igwe Mkpanaka Rubber
Urgicalwa Disposable uwe Machine
Urgicalwa Disposable uwe Ime Machine
Urgicalwa ahụ Disposable Latex uwe Ime Machine